Goethe. Icheta nna nke German Romanticism | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Eserese nke Goethe, nke Johann Heinrich Wilhelm Tischbein dere.
Johann Wolfgang von Goethe hụrụ ìhè mbụ ya 28 August 1749. Na-echebara ihe echiche nna nke German Romanticism Ọ bụ nwoke mara mma ma na-eme ọtụtụ ihe. Onye na-ede uri, onye ode akwụkwọ, onye na-ede egwuregwu na ọkà mmụta sayensị, kpaliri mmetụta ndị edemede, ndị na-eche echiche, ndị na-ede akwụkwọ, na ndị na-ese ihe n'ọgbọ na-abịanụ na ebe niile. Taa, m na-eme ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ ya 4 nke abụ ya na 20 nke nkebi ahịrịokwu ya.
2 4 poems
2.1 Abalị mara mma
2.2 Anyanwụ nke ndụ
2.3 Hụnanya n'enweghị ezumike
3 Nkebi ahịrịokwu 20
Johann Wolfgang von Goethe bụ n'ezie otu n'ime ndị kasị ukwuu na kasị mara amara na-ede uri, playwrights na akwụkwọ akụkọ nke Germany na onye nnọchi anya kachasị nke mmegharị ịhụnanya. Ọrụ ya gbasara ụdị dị ka abụ, abụ ma ọ bụ ihe nkiri. Ọ zụlitere mmepụta sayensị na isiokwu ndị dị ka botani ma obu a agba tiori. O metutara echiche niile, edemede na nka n’ozuzu ya.
N'etiti ọrụ ya nke kachasị mkpa ma bụrụ onye ama ama n'ụwa niile bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya ihe nkiri ya Ma mma, nke kachasị akara ngosi na nke kachasị emetụta, isi iyi nke mmụọ nsọ na ihe nke ọtụtụ nsụgharị. Akwụkwọ akụkọ ndị kacha nwee nnọchi anya ya bụ Misadventures nke Young Werther o Aha ya bụ Wilhelm Meister. Na uri, ya Kwadoro nakwa Hermann na Dorotea ma ọ bụ nke ha Elọ ndị Roman.
Aha nna ya na-aza aha ya Institutelọ akwụkwọ Goethe, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgbasa ọdịnala na asụsụ German n'ụwa niile. Ndị a bụ 4 nke obere uri ya icheta ya na Nkebi ahịrịokwu 20 ọzọ
Abalị mara mma
Aghaghị m ịhapụ ụlọ ahụ
ebe onye m huru n'anya bi,
na steepụ nzọụkwụ
Ana m awagharị n’etiti oke ọhịa;
ọnwa na-awa na ahịhịa,
gbaa ume ikuku di nro,
na birch, na-amagharị,
ísìsì-ya we rue ya aru.
Kedu ka o si dị m mma
nke mara mma n'oge okpomọkụ n'abalị!
Lee ka o si dị mma ebe a
gịnị na-eme ka anyị jupụta n'ọ joyụ!
Ọrụ siri ike ịsị! ...
Ma m ga-enye
A puku abali dika nke a
maka otu na enyi m.
Anyanwụ nke ndụ
n'ime ụlọ elu
ị nwere ike sonso
umu nnunu adapuwo du n’ime ohia.
Chere ngwa ngwa
ị ga-ezu ike.
Hụnanya n'enweghị ezumike
Site na mmiri ozuzo, site na snow,
Site n'oké ifufe m na-aga!
N'etiti ọgba na-egbu maramara,
N'oké mmiri ozuzo ka iju mmiri m na-aga,
Na-aga n'ihu mgbe niile!
Udo, ezumike, efegoro.
Mee ngwa ngwa na mwute
Achọrọ m ka e gbuo m
Nke ahụ niile dị mfe
Kwadoro na ndụ
Bụrụ onye riri ahụ nke agụụ na-agụ,
Ebe obi nwere obi maka obi,
Odi ka oku abuo
Yiri ka ha abuo enwela.
Kedu ka m ga-esi efe?
N’efu ka esemokwu nile dị!
Bright okpueze nke ndụ,
Ọgba aghara ...
Hụnanya, ị bụ nke a!
Ka m jiri anya m jiri obi oma gwa gi,
ebe m na-ekwu ya gọnarị egbugbere ọnụ m!
Ndaba bu ihe di nkpa
ọbụna mmadụ, dị ka m, na-ewe iwe!
Mwute na nrọ ọ na-eme anyị ọbụna
ihe na-atọ ụtọ na nke kasị dị nro nke ịhụnanya;
oyi na-agụ m agụụ na nsusu ọnụ gị
tọpụ aka gị, ka m jide.
Obere mmetụ, n'oge ọzọ
zoro ezo ma na-efe efe, ahụrụ m ya n'anya!
Ọ bụ ihe dị ka violet mara mma,
nke malitere n'ime ubi na March.
Agaghịzi m egbute Roses na-esi isi
iji kpuchie ha ihu gị.
Frances, ọ bụ mmiri ma ọdịda
maka m, dị mwute ikwu na ọ ga-adị.
Nkebi ahịrịokwu 20
Enweghi obi uto, dika obi uto kachasi, na agbanwe ihe obula.
Mmadụ na-ekwere onwe ya mgbe niile na ọ karịrị ya, na-ewere onwe ya na-erughị ka ọ bara uru.
Iche echiche na-atọ ụtọ karịa ịmara, mana ọ na-atọ ụtọ karịa ile anya.
Ọ dị mma n'ezie inweta, mana ọ ka mma ịhapụ.
Iche echiche dị mfe, ịme ihe siri ike, na itinye echiche gị n’ọrụ bụ ihe kacha sie ike n’ụwa.
Ezi ihe nlereanya na-eme ka omume siri ike dị mfe.
Ihe anyị hụrụ n'anya na-eme anyị.
Revengebụ ịta ahụhụ kachasị njọ bụ nlelị nke mmegwara ọ bụla
Ọ dịghị onye maara ihe ọ na-eme mgbe ọ na-eme ihe ziri ezi, mana ihe na-ezighi ezi na-ama mgbe niile.
A na-eme mmadụ site na nkwenkwe ya. Dika okwere, otua ka odi.
Ishụnanya bu ezigbo ihe; alụmdi na nwunye, ezigbo ihe; ihe mgbagwoju anya nke ezigbo ya na nke zuru oke adighi ata ya aru.
Onye na-eme ihe na-achọghị ọdịmma onwe ya naanị mgbe ọ na-akwụ ya ụgwọ.
Ihe ị na-enweghị ike ịghọta, ị gaghị enwerịrị ya.
Ọ dịghị ihe na-enweghị isi n’ụwa. Ihe niile dabere n'echiche nke echiche.
A na-akpụ akparama agwa na ebili mmiri nke ụwa.
Uche mmadu adighi oke oke.
Anyị niile nwere oke oke na anyị kwenyere na anyị ziri ezi.
Mmehie dee akụkọ ihe mere eme, ihe ọma adịghị.
Nwoke kacha nwee obi uto n’uwa bu onye ma etu esi amata amam-ihe ndi ozo ma nwekwaa a rejoiceuri n’ime ihe oma ndi ozo dika odi nke ya.
Akwụkwọ ụfọdụ dị ka edepụtara ka ọ ghara ịmụta ha, kama ọ bụ iji mee ka a mata ihe onye dere ha maara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » Goethe. Icheta nna nke German Romanticism